ရှစ်လေးလုံးပါတီ ခေါင်းဆောင်နှင့် ဒုခေါင်းဆောင်များကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ တင်ပြရန?? - Yangon Media Group
ရှစ် လေးလုံးပါတီ၏ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ တင် ပြရန် ပခေါင်းဆောင်၊ ဒုခေါင်း ဆောင်နှင့် ပါတီဝင်အင်အား ၁ဝဝဝ စာရင်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ် ကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်မြောက် ရေးဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးရဲနိုင်အောင်က ပြောသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်မြောက် ရေးကော်မတီနှင့် ဇာမဏီမြန်မာတို့ပူးပေါင်းကာ နိုင်ငံသားလုံခြုံမှု စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၈/၂ဝ၁၈) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်း အနားအပြီးတွင် ၎င်းက ဒီမိုကရေ စီတူဒေးသို့ အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”နှစ်ခုစလုံးကတော့ အသင့်ပါ။ အားလုံးကအသင့်ဖြစ်နေပြီ။ ပါတီဝင်အင်အား ၁ဝဝဝ တင်ပြဖို့လည်းအဆင်သင့်ပါ”ဟု ဦးရဲနိုင် အောင်က ပြောသည်။ ပါတီ၏ ပခေါင်းဆောင်၊ ဒု ခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ဖော်ပြောကြား ဦးမည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ရန် ပါတီတည်ထောင်လိုသူ အနည်းဆုံး ၁၅ ဦးဖြင့် ၎င်းတို့တည် ထောင်လိုသောပါတီအမည်ကို ဖော်ပြကာ နိုင်ငံရေးပါတီတည် ထောင်ခွင့်ပြုရန် ကနဦး လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှခွင့်ပြုပါက ပခေါင်း ဆောင်၊ ဒုခေါင်းဆောင်တို့ကို ရွေးချယ်ကာ ရွေးကောက်ပွဲကော် မရှင်သို့ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန် ဆက်လက်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိပြီးသည့် ပါတီများအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးတွင် စည်းရုံးမည့်ပါတီ ဖြစ်ပါက ပါတီဝင်ဦးရေအနည်းဆုံးတစ်ထောင်၊ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်များ၌ စည်းရုံးမည့် ပါတီဖြစ်ပါက အနည်းဆုံးပါတီဝင်ဦးရေ ၅ဝဝ တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ၊ နည်း ဥပဒေတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ရှစ်လေးလုံးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပထမဆင့်အနေဖြင့် ပါတီတည်ထောင်လိုသူ ၁၅ ဦးဖြင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်က လျှောက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်အထိ ရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်မှတစ်စုံတစ်ရာ အကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိ သေးကြောင်း ဦးရဲနိုင်အောင်က ပြောသည်။
ပါတီတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီးပါက ပါတီကျစ်လျစ်ခိုင်မာရေးနှင့် အခြားသောမိတ်ဖက်ပါတီများနှင့် မဟာမိတ်တည်ဆောက်ရေးတို့ကို အဓိကလုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက် ပြောသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီအနေဖြင့် လက်ရှိအချိန်တွင် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်ရုံးခွဲ ခုနစ်ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ပြီး စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်က တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ နိုင်ငံ ရေးပါတီဖြစ်မြောက်ရေး ရန်ကုန်တိုင်းရုံးခန်းတွင်နိုင်ငံသားလုံခြုံမှုစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
''ရှင်ဥပဂုတ္တ မထေရ်မြတ်ကြီး ထေရုပ္ပတ္တိတော် ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ခွင့်ရတာ အိပ်မက်မက်နေ သလိုပါပဲ'' လ??